Tusaalooyinka xarfaha | Hal-abuurka khadka tooska ah
Encarni Arcoya | 26/04/2022 21:19 | Design Graphic
Sida naqshadeeye garaaf ah, waa inaad ka warqabtaa isbeddellada hadda jira iyo moodooyinka si aad awood ugu siiso macaamiishaada adeeg hadba waxay qaataan (ama qaadan doonaan). Xaaladdan oo kale, xarafku wuxuu helayaa sumcad badan oo loogu talagalay calaamadaha iyo shirkadaha. Sidaa darteed, sidee ku saabsan tahay inaan ku tusino qaar ka mid ah tusaalooyinka xarfaha?
Haddii aadan weli garaneyn sida looga codsado shirkad, ama aad u maleyneyso inaan loo isticmaali karin qaab kasta, waxaan ku sameyneynaa inaad bedesho maskaxdaada. U fiirso.
1 Waa maxay warqad
1.1 Xarfaha, qorista iyo qoraalka
2 tusaalayaal xaraf
2.3 Tusaalooyinka xarafka ku dul qoran koobabka
2.5 Tusaalooyinka qoraalka ee baararka iyo makhaayadaha
Waa maxay warqad
Waxa ugu horreeya ee aan sameyn doono waa inaan dib u eegno aasaaska xarfaha, tan, waxaan ku bilaabaynaa qeexitaankeeda. Waxaa lagu qeexaa sida farsamada sawirka taas oo, halkii laga sawiri lahaa sawirada (xayawaanka, qaababka, dadka...) waxa la sameeyo waa in xarfaha gacanta lagu rinjiyeeyo. Laakiin mid kasta oo iyaga ka mid ah wuxuu leeyahay qaab cajiib ah oo gaar ah. Iskuma sinna laakiin waxay leeyihiin astaamo u gaar ah oo ka dhigaya inay ka madax bannaanaadaan midba midka kale, xitaa marka ay isku xaraf tahay.
Si kale haddii loo dhigo, xarafka waa hawl aad ku sawirto xarfaha, iyaga oo siinaya aragti ku dhawaad ​​sida in ay sawir yihiin, tusaale ahaan laftiisa, umana baahna sawiro ama calaamado si ay u soo baxaan mar haddii ay iyagu ku filan yihiin oo ay ka hareen.
Xarfaha, qorista iyo qoraalka
Inkasta oo laga yaabo inaad u malaynayso in labada ereyba ay tixraaci karaan wax isku mid ah, dhab ahaantii maahan. Xarfaha, qoraal-qoraalka iyo qoraalka, inkasta oo ay xusaan xarfaha, Habka ay u sameeyaan gabi ahaanba way ka duwan yihiin mid walba. Waxaad arki doontaa:
Waxa qoraalku sameeyo waa xarfaha naqshadaynta. Laakiin dhammaantood waa isku mid Wax farqi ah oo u dhexeeya ma jiroXataa xarfo isku mid ah uma dhexeeyaan.
Farshaxannimada waxaa lagu qeexaa sida farshaxanka "qoritaanka si qurux badan". Taasi waa, si gaar ah ayaa loogu qoray si xarfaha ay u qurux badan yihiin, laakiin halkaas ayay ku sii jiraysaa. Ma beddelo iyaga mar loo qoray si loo qurxiyo.
Oo xarafku waa sawiridda xarfaha iyo mid walba ka dhigo mid kala duwan oo soo jiidata dareenka.
Markaan arkay, Waxaan dhihi karnaa in xarafku yahay hal weji oo kale oo sawir-qaadis ah. Waa qoraal qurux badan, laakiin sidoo kale wax ka beddelka xarfaha si ay xarfaha ugu ekaadaan sawirro ( xarfo ama erayo).
Ogaanshaha kor ku xusan, waxaad horeyba u haysataa saldhig yar oo ku saabsan xarfaha, oo kugu filan inaad fahamto hoosta tusaalooyinka kala duwan ee xarfaha ee aan ka helnay shabakada. Markaa waxaad arki doontaa sida ay ugu dhowdahay sidaad u malaynayso iyo waxaad awoodi doontaa inaad siiso macaamiisha soo jeedin kale oo laga yaabo inay noqoto mid aad u guulaysata iyo aqbalaadda dadweynaha.
Waxaa laga yaabaa inaadan xasuusan, laakiin runtu waxay tahay in calaamad u weyn sida Ikea waxay u adeegsatay xayeysiisyadooda.
Gaar ahaan, xayeysiiska "Save the cashs", halkaasoo lagu arko buug bogag roganaya iyo iyadoo u adeegsanaysa xaraf erayo gaar ah ama weedho meesha aad rabto in aad xooga saarto.
Markaa waad arki kartaa waxa aan ka hadlayno, waa kan ku dhawaaqista:
Erayadan la soo gaabiyay waxay u dhigmaan makhaayad dabiici ah. Halkudhiggiisu waa "Cagaar, waan ku jeclahay cagaar" iyo waxay waydiisatay naqshadeeye Lisa Nemetz caawinaad si ay u abuurto qaab ka duwan calaamadahooda. Ilaa heer laga helo waxay ka raadinayeen xarfaha.
Haddii aad aragto, gudaha Xaqiiqadu ma laha siro badan. Waa calaamad leh midab cagaaran ama madow, oo leh sawir aan si buuxda loo qadarin, iyo, korkooda, erayada cagaarka ah ee aan ku jeclahay cagaarka, VQV.
Waxay ku qoran yihiin xarfo oo waa kuwo aan rasmi ahayn isla markaana leh firfircooni sidaas oo kale ah wuxuu kaa dhigayaa inaad rabto inaad wax badan ka ogaato makhaayaddan.
Tusaalooyinka xarafka ku dul qoran koobabka
Kaliya fiiri koobabka, tusaale ahaan Amazon, si aad u hesho tusaalayaal badan oo xaraf ah. Waxay yihiin naqshado aan u baahnayn sawirro, iyo mararka qaarkood xitaa midabyo, si ay u soo baxaan sababtoo ah waa xarfaha laftooda kuwaas oo noqda sawirro.
mararka qaarkood pWaxay la socon karaan sawirro qaar asalka, ama dhinacyada, si ay uga dhigaan kuwo aad u muuqda, laakiin gadaal ayay ka shaqeeyaan. Waxa ugu muhiimsan waa xarfaha, erayada iyo weedhaha.
Tusaalooyin kale oo ka mid ah warqadaha aan ku siinno ayaa nagu soo qaadanaya Bryan Patrick Todd, naqshadeeye garaafyo yaa waxa loo wakiishay mashruuc sawir gacmeed ah oo uu shirkad ku xayaysiin lahaa. Dabcan, wuxuu isticmaalay xaraf si uu u soo jiito dareenka.
Haddaad u fiirsato, ma jiro sawir la socda jumladaas. Haddii ay dhacdo in aad garan weydo Ingiriisi waxa ay la macno tahay: "In aynu wada dhisno wax ka weyn nafteena". Weedha ayaa ah midda qabsata qof kasta oo arka, halka shirkadii, magaca, dib loo dhigay. sababtoo ah isagaama waxa aad rabto in weedhaasi ay ahaato oo lagu xasuusto. Iyo sidoo kale in ay la xiriirto shirkadda.
Si taas loo sameeyo, naqshadeeyuhu wuxuu sameeyay naqshadii hore, iyo sidoo kale majaajilo, laakiin waxa uu naftiisa ku caawiyay sawir-qaadaha calaamada si uu u dhammeeyo sawirka iyo in ay noqon doonto sidii uu u malaynayay. Natiijaduna waa caddahay.
Tusaalooyinka qoraalka ee baararka iyo makhaayadaha
Waxay u noqotay moodada baararka iyo makhaayadaha inay isticmaalaan shalkboard-ka ama kuwa elegtarooniga ah si ay "u sawiraan menu-ka". Xaaladdan oo kale, looguma talagalin in dadku ogaadaan waxay cuni karaan. Hadii kale ka dhig inay ku raaxaysato naqshad soo jiidasho leh, oo dahaadh leh oo ay jeceshahay si aad isugu daydo in aad hal ama dhowr shay oo xarafkaas lagu xayaysiiyo.
Dhab ahaantii, xarfaha sidan oo kale ah ayaa lagu arkaa daabacado badan, baararka, makhaayadaha, gudaha ku dhegan, bannaanka loo soo bandhigo si ay u soo jiitaan dareenka ... Runtuna waa inay helaan. Sababtoo ah maaha warqadda gacanta lagu qoray ama daabacan ee caadiga ah. Waxa aad ku siinaysaa taabasho erayada iyo sawiro yaryar oo la socda oo qof kastaa garanayo.
Runtu waxay tahay, nolol maalmeedka, xarafku waa qayb ka mid ah haddii aan jeclayn iyo haddii kale. Soo jeedintayadu waa inaad fiiro gaar ah u yeelato. Waxaad arki doontaa sida maalinta oo dhan aad u hesho qaar ka mid ah tusaalooyinka xarfaha, ha ahaato funaanadaha, koobabka, baararka, makhaayadaha, dukaamada moodada, iwm. Haddaba maxay tahay sababta aanay u noqonayn soo jeedin macmiilkaagu inuu wax naqshadeeyo isagoo isticmaalaya farsamadan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » tusaalayaal xaraf